Iphupha malunga neJam ▷ ➡ Discover kwi-Intanethi ▷ ➡️
Igama elithi jam ngokwesiko lisetyenziselwa ukuchaza ukusasazeka okwenziwe kwiziqhamo ezibiliswe neswekile. Ziziqwenga ezimbalwa kuphela zeziqhamo ezinokufunyanwa kwimveliso yokugqibela.
Kukho amagama ohlukeneyo engingqi ejam. Umzekelo, igama elithi Schlecksl lisetyenziselwa oku eBaden, ngelixa usePalatinate, nangona kunjalo, iLubricant okanye iSchmeer. E-Elztal, olu hlobo lweziqhamo lwaziwa njengeStrichi.
Njengenxalenye yesidlo sakusasa, ijam ithandwa kakhulu kwaye nabani na othanda ukuyitya uya kuyiphupha ngenye imini. Kodwa nguwuphi umyalezo oziswa leli phupha? Ufuna ukubonisa ntoni?
1 Isimboli yephupha «jam» - ukutolika ngokubanzi
2 Uphawu lwephupha «jam» - ukutolikwa kwengqondo
3 Uphawu lwephupha «jam» - ukutolika kokomoya
Isimboli yephupha «jam» - ukutolika ngokubanzi
Uhlalutyo lwamaphupha ngokubanzi litolika uphawu lwephupha "ijam" njengesilumkiso kumphuphi ukuba agxile kuso amaxesha anzima Misela. Kwixesha elizayo elikufutshane uya kufumana iingxaki ekufuneka uzilungiselele. Umfanekiso wephupha ungabonisa nokuzithemba umntu oleleyo aza kuhamba ngalo kweli xesha linzima.
Ngamanye amaxesha, isiqhamo esimnandi esithe saa ephupheni sinokubonisa ukuba lowo uphuphayo ngoku ufuna ukuvuna umvuzo ngomsebenzi wakhe. Ukusasaza i-marmalade kwisiqwenga sesonka, i-muffin, okanye i-toast ngeargarine ngelixa ulele, oku kunokwenzeka amandla amatsha kwaye bafuzisela amandla anikwe ngoku umntu oleleyo.
Iziqhamo ezaziwa ngokuba ziiplp ezigciniweyo njengephupha kuthethwa ngokubanzi ngazo I zi ganekoezenzeka ngaphambili kwaye zazithandeka kakhulu kumntu ophuphayo. Kuya kufuneka ubakhumbule kwakhona ebomini bokuvuka, kuba banokukunceda kwezinye iimeko kwixesha elizayo. Ukuba utya ijam elungileyo ephupheni lakho, unokulindela ithamsanqa elingalindelekanga kwaye mhlawumbi nohambo.
Ukutolikwa ngokubanzi kwesimboli yamaphupha "ijam", kunokuba yinto ebalulekileyo ukuba loluphi uhlobo olwabonwa ephupheni okanye zeziphi izithako ezazisetyenziselwa ukupheka ijam. Ijam yomdiliya ihlala isetyenziswa njengesilumkiso kokunye Umonde Ukuqonda, ijam ye-strawberry, kwelinye icala, ithembisa intuthuzelo kunye nenkuthazo yobomi bokuvuka.
Kule meko, iziqhamo ezininzi okanye iintlobo zeziqhamo ziyabonakala. Imizekelo yoku ingangamaqunube amnyama, irasibheri, irobhothi, irhubarb, iinyithi, okanye iibhanana kunye neepesika. Kodwa neswekile njengesixhobo sejam ephupheni inokubonelela ngolwazi oluthe kratya ekutolikeni.
Uphawu lwephupha «jam» - ukutolikwa kwengqondo
Ukusuka kwindawo yokujonga kwengqondo, i-jam ikakhulu luphawu lokuphupha. Iziyolo zenyama Kutheni le nto inokuchazwa njengolwaneliseko lweemfuno zesondo kunye nezesondo.
Ukuba ufikelela kwingqayi yejam ephupheni lakho, iphupha lakho kufuneka likuxelele ukuba kungekudala uza kuba nayo yonke into yakho amandla kwaye kufuneka asebenzise oovimba bakhe bamandla kwisizathu esithile ebomini bakhe. Umxube wejamu ovela kumajikijolo ahlukeneyo ephupheni unokubonisa isiphithiphithi sangaphakathi kwindawo erotic.
Ukuba ijeli kunye nejam ziyavela ephupheni ngokunxulumene nesimboli yephupha "jam", umphuphi kufuneka, ngokokuchazwa kwengqondo ngephupha, acinge iminqweno yesini Nika ingcaciso. Kungenxa yokuba kuphela xa yena ngokwakhe eye waqonda ngokuchanekileyo utyekelo anokuthi anxibelelane ngalo okanye anelise abanye ngalo.
Uphawu lwephupha «jam» - ukutolika kokomoya
Ngokwenkcazo yephupha lokomoya, uphawu lwejam ephupheni lubonisa umnqweno wamaphupha kuye into ethile. Ku lungile ukwenza. Ungathanda ukunyanga into ethile ekhethekileyo kwaye uzitotobise kuyo el mundo yomlindo.